Pejy fandokoana fiara fitaterana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Fiara fananganana tranokala tokana
Ny zazalahy manokana indrindra dia variana amin'ny fiara sy fiara lehibe amin'ny sokajin-taona rehetra. Mety tsy noho izy ireo liana tamin'ny haitao taloha, fa satria ny mitondra fiara dia mifamatotra amin'ny zavatra manaitaitra ihany koa. Ary mazava ho azy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny tranokala fananganana dia mahafinaritra be.
Pejy fandokoana fiara fitaterana
Antony ampy ahafahanay manolotra ny sokajin'ireo fiara manamboatra. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy topy voafantina:
Lozera sy bulldozer eo aloha
Kamio / fanary kamio
Tsy manana sokajy misaraka amin'ny fiara manangana sasany izahay. Ny fipihana eo amin'ny rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ireo fiaran'ny tranokala fananganana Pejy fandokoana. ​
Boky fandokoana tranokala fanariam-pako